That's so good, right?: လူပျို့အမေ
ဒေါ်တင်မမကြီးအဖို့ ထုရသည့် ရင်ဘတ်သည် သူမ၏ ရင်ဘတ်ဖြစ်နေသောကြောင့် အသံထွက်ရုံ ခပ်သာသာလေး ထုလိုက်ရသည်။ သို့ကြောင့်ပင် စိတ်ထဲတွင် ရှိနေသည့် ကလိတိတိများသည် မကျေမချမ်းနိုင်ဘဲ “ဘယ်နှယ့်တော် … ပြောစရာလား။ တန်မှန်းမသိ၊ မတန်မှန်း မသိ’ ဟု ဆက်ပြီး ရေရွတ်မိ၏။
ထိုသို့ စဉ်းစားရင်းပင် ငြိမ်းလုလု မာနမီးတောက်သည် “ငါ့သား” ဆိုသည့် ဘဝင်လေဟပ်ကာ ချက်ချင်းပင် အသစ်တစ်ဖန် ပြန်လည်ကြီးထွား ပြန်လေရာ ပါးစပ်ကို စေ့စေ့ ပိတ်မထားနိုင်တော့ဘဲ “အံ့ကြီးကို သြပါရဲ့ တော်” ဟု အာလုတ်သံကြီးနှင့် ဟစ်မိ၏။ “သူ့သမီး အသားမည်းမ ကိုများ ငါ့သား အကောင်းစားနဲ့ ပေးစားချင်ရသေး သတဲ့” ဟု မကျေလည်စွာ ပွစိပွစိရွတ်ရင်း သက်ပြင်းမောကို ရှူးခနဲမြည်အောင် မှုတ်လိုက်သည်။
‘သမီးက ရူပဗေဒနဲ့ ကျောင်းပြီးတာလေ၊ သူက ဘွဲ့ရတော့ ကျောင်း ဆရာမ လုပ်ချင်တာ။ အဲဒါကို ကိုယ်တွေက “တော်ပါ သမီးရယ်၊ ကိုယ်က ပညာတတ်ပြီပဲ။ လစာလေး တစ်ပဲခြောက်ပြားနဲ့ အစိုးရလခစားလည်း လုပ်ချင်မနေပါနဲ့။ ကိုယ့်အဖေရဲ့ ကုမ္ပဏီမှာပဲ အလုပ်သင်အဖြစ် ဝင်လုပ်ပါ’ တားရတယ်။ အခုတော့ သူက အဖေအားကိုးရတဲ့ မန်နေဂျာကြီး ဖြစ်နေပြီလေ။
ဒါတောင်မှ ဒီကြားထဲ စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းဆိုလား နိုင်ငံခြားကနေ ဘွဲ့တစ်ခု ထပ်ယူလိုက်သေးတယ်” သမီးအကြောင်း ရွှန်းရွှန်းဝေအောင် ကြော်ငြာထိုး သွားသည့် ဒေါ်စိန်ရွှေမြ၏ စကားသံကို ပြန်ကြားမိလျှင် ဒေါ်တင်မမကြီးသည် “ဟင့်”ခနဲ မဲ့၏။ ပြီးလျှင် “လစာလေး တစ်ပဲခြောက်ပြား အစိုးရလခစားလည်း လုပ်ချင် မနေပါနဲ့တဲ့။
အဲဒီတုန်းကများ သူ့သမီး အဲဒီ ကျောင်းဆရာမအလုပ် ရချင်လို့ ဖျပ်ဖျပ်လူးနေတာ မှတ်မိသေးတယ်။ သူ့သမီးကရော နာမည်ကသာ စိန်နီလာ၊ လူက ညံ့လိုက်တာမှ ချာတူးကို လန်လို့။ ဖြေတဲ့ စာမေးပွဲတိုင်း ကျ။ နောက်ဆုံး စေလိုရာစေ လျှောက်တာတောင် ဘယ်မှာ အောင်လို့လဲ။ ဒါနဲ့ပဲ စာမေးပွဲဖြေစရာ မလိုတဲ့ သူ့အဖေရဲ့ အလုပ်ထဲကိုပဲ ဝင်လိုက်ရတာကိုများ အချင်းချင်း ကြွားချင်သေးတယ် ဒင်း (သင်း) က။
ပြီးတော့ ပြောသေးရဲ့ ကုမ္ပဏီတဲ့။ အဖေက ဥက္ကဋ္ဌ၊ သမီးက မန်နေဂျာ၊ အမေက စာရင်းကိုင်၊ သားက ပြာတာ။ လက်ချိုးရေလို့မှ လူက လက်တစ်ဖက် မပြည့်တဲ့ဟာများ ကုမ္ပဏီတဲ့။ ဘာတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်က စိန် ရေချိုရေငန်ထွက် ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်တဲ့။ ငါးပိ၊ ငါးခြောက်သည်က ငါးပိငါးခြောက်သည်ပေါ့အေ။ အလကား ကြွားလုံးတွေ” ဟု စိတ်ထဲမှ ချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ ဆက်တွေးသည်။
ထိုသို့တွေးရင်း မျက်စိရှေ့မှ ဒေါ်စိန်ရွှေမြ ပေးသွားသည့် ငါးပိနှင့် ငါးခြောက် လက်ဆောင်ထုပ်ကို မျက်စိရောက် လျှင်မူ “ဟင်း” ခနဲ သက်ပြင်းရှည်ကြီးတစ်ခု ချ၏။ ပြီးလျှင် “အမယ်လေး … သားကိုတော့ ငါးပိ လေးငါးဆယ်သား လောက်နဲ့တော့ မလဲနိုင်ပါဘူး” ဟု မဲ့မဲ့ရွဲ့ရွဲ့ သာသာထိုးထိုး ဆက်တွေး၏။ ယင်းမှ သားဖြစ်သူအကြောင်း ကို အမျှင်တတန်းတန်း ဆက်တွေးပြန်သည်။
ဒေါ်တင်မမကြီး၏ သားသည် အရပ်မနိမ့်မမြင့် ပိန်ပိန်ပါးပါး ဖြစ်သည်။ အသားညိုစိမ့်စိမ့်တွင် အရိုးအဆစ် ပြေပြစ်လေရာ ကြည့်ပျော်သူ ဖြစ်၏။ အပြစ် ပြောစရာဆို၍ နှာခေါင်းလေးနည်းနည်းကြီးသည့် အချက်တစ်ချက်သာ ရှိ၏။ သို့သော် ဒေါ်တင်မမကြီး၏ စိတ်ထဲတွင်ကား ထိုနှာခေါင်းကို အပြစ်ဆိုစရာဟု မထင်။
အမေပီပီ ယင်းကြောင့်ပင် သူ့သားသည် ပို၍ ခံ့ထည်နေသည်ဟု စိတ်တွင် တွေး၏။ ထို့ပြင် သူမ၏ သားသည် မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာများတွင် ဓာတ်ပုံ မော်ဒယ်လ်အဖြစ် သုံး, လေးကြိမ်မျှ ပါဖူးသည့် အဖြစ်ကလည်း ဒေါ်တင်မမကြီးအား ပို၍ သွေးနားထင် ရောက်စေ၏။ ပြီးလျှင် သူမ၏ သားသည် လူအများ၏ အလယ်တွင် အဖိုးတန် မျက်နှာပွင့်လှသည့် ဆရာဝန် တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်နေသေးသည်ပဲ။
“သားက ဆရာဝန် မော်ဒယ်လ်လေ … အဟင်းဟင်း” ဟု တစ်ယောက်ယောက်ကိုများ ပြောလိုက်ရလျှင် ပါးစပ်ထဲ ဘယ်လောက် စေးစေးပိုင်ပိုင် ရှိလိုက်သလဲ။ ဒီခေတ်ကြီးမှာ ဒီထက် မျက်နှာပွင့်တာ ဘာရှိနိုင်သေးတုံး။ စဉ်းစားရင်းပင် “ခေတ်ကြီးကိုက” ဟူသော အတွေးသည် ဒေါ်တင်မမ ကြီး၏ စိတ်ထဲ ဆက်ဝင်လာပြန်သည်။“အင်း ခက်တယ်… ခက်တယ်၊ ခေတ်ကြီးကိုက ခက်တယ်။ ဘာတဲ့ ‘လူပျို့ အမေ ဆန်တစ်အိတ်နဲ့ တောင်ထိပ်မှာပုန်း’ ဆိုတာ တကယ်ပါပဲ။ အင်း … ဒီခေတ်မှ ဒီခေတ်”
နောက်ဆုံး ဒေါ်တင်မမကြီးသည် သူမ၏ အညာ ကောက်ညှင်းထုပ်နှင့် တူလှသည့် ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကို ဆက်တီခုံပေါ် ခြေပစ်လက်ပစ် တင်လိုက်ရင်း “ဒီခေတ်ကြီးမှာ သားလူပျို အကောင်းစားနဲ့ အမေလုပ်ရတာလည်း မလွယ်ဘူးတော်ရေ့” ဟု တစ်ယောက်ယောက်ကိုပဲ ညည်းသလိုလို၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲ ညည်းသလိုလို ခပ်ကြွားကြွားလေး ဆိုလိုက်ရမှ ရင်ထဲတွင် ချောင်၏။
သား ပြန်လာမည်ဆိုသည့် သတင်းကြောင့် ဒေါ်တင်မမကြီးသည် မနက်ခင်းတစ်ခုလုံး ဗျာတောက် နေသည်။ ခြံထောင့်ကို ရောက်၏။ “ဒီအမှိုက်တွေ ရှင်းပါဟဲ့” အော်၏။ သစ်ပင်အောက်ကို ရောက်၏။ “ဟို အကိုင်းကို ခုတ်ပစ်လိုက်စမ်း” ဟု ဟစ်၏။ အိမ်၏ ဧည့်ခန်းထဲတွင် ရပ်မိ၏။ “ပန်းအိုးထိုးထားတာကိုက ပုံမကျဘူး” ဟု ဆူ၏။
သားအိပ်မည့် အခန်းထဲ ဝင်ကြည့်ချိန်တွင်ကား ဒေါ်တင်မမကြီး၏ မြည်တွန် တောက်တီးသံများသည် မရပ်တော့။ တစ်အိမ်လုံး လှည့်ပတ်ကြည့်ပြီး လျှင်ကား ဒေါ်တင်မမကြီးသည် “သူမ၏ သား ခဏမျှ အလည်ပြန်လာမည့်အကြောင်း” ကို မြို့ပတ်ကာ မောင်းထု၏။ “သားက အိမ်ပြန်မလာတာ တစ်နှစ်လောက်တော့ ရှိပြီ။ အမယ်လေး … မအားဘူး။ သူတို့ ဆရာဝန် ဆိုတာတွေက ရုံးပိတ်ရက်မရှိ၊ သင်္ကြန် မရှိ၊ အခါမရှိ၊ ဥပုသ်သီတင်း မရှိရယ်။
သူ ဝါသနာပါတဲ့ မော်ဒယ်လ်အလုပ်တောင် ဆက်မလုပ်နိုင်တော့တာသာ ကြည့်တော့” ဟူသော စကားကို ကျယ်လောင်ကျယ်လောင် ဆိုရင်း တဟင်းဟင်း မျှင်းရယ်၏။ ထို့နောက်တွင် သား၏ တော်ပုံ၊ ထက်မြက်ပုံ၊ သွက်လက်ချက်ချာပုံတို့ကို စကားဆက်သည်။ သားအကြောင်း အကောင်းဋီကာ ဖွဲ့ပြီးနောက် အကြွားသန်လေခြင်း မဖြစ်စေရန် အဆုံးသတ်တွင်မှ ဟို ငယ်ငယ် ကလေးဘဝက ဆိုးပုံ၊ တေပုံ၊ ပေပုံများဖြင့် သူမ၏စကားကို အဆုံးသတ်သည်။
“ကောင်မလေးကိုက ပါးစပ်ရဲလွန်းတယ်။ ပုံစံကလည်း ပျံတံတံ နန့်တန့်တန့် မပြောလိုက်ချင်ဘူး”မြို့ပတ်ပြီး နှစ်နာရီခန့်ကြာလျှင် ဒေါ်ကင်မမကြီးသည် ပွစိပွစိဖြင့် အိမ်ပြန်ရောက်လာသည်။ အကြောင်းကား လမ်း၌ တွေ့သော ကောင်မလေး တစ်ယောက်မှ “ယောက္ခမကြီး …. ကိုကို အိမ်ပြန်လာမယ်ဆို” ဟု အော်ဟစ်ပြီး နှုတ်ဆက်ဂါရဝ ပြုလိုက်သောကြောင့် ဖြစ်၏။
“ဘယ်နှယ့်တော် … သူ မရှက်ပေမဲ့ ငါက ရှက်တယ် မိန်းမတဲ့ … ဘယ်မှာလဲ ဣနြေ္ဒ၊ ဘယ်မှာလဲ သိက္ခာ။ ခေတ်ကြီးက ကပြောင်းတိ ကပြောင်းပြန်။ ကျုပ်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းကများ မိန်းမကြိုက်တော့ မျှော်လိုက်တာ၊ ယောက်ျားကြိုက်တော့ စိုက်စိုက်လာတဲ့။ အခုတော့ မဟုတ်ပေါင်”ဟု အိမ်ရောက်ရောက်ချင်း အော်ကြီးဟစ်ကျယ် လုပ်၏။
သား၏အဖေ၊ လင်ဖြစ်သူမှ “ဟ … ဘာဖြစ်သေးတုံး၊ ကိုယ်က သားရှင်ပဲ။ ဟုတ်တယ် သမီးရေလို့ ပြန်ပြောလိုက်ပေါ့၊ မနာပါဘူး” ဟု ပြောခါမှ ဒေါ်တင်မမကြီးသည် ပိုဆိုးကာ “အမယ်လေးတော်” ဟု ထဟစ်ပြန်သည်။“နာတယ်တော်ရေ့၊ ကိုယ့်ဘက်က သားရှင်ဆိုပေမဲ့လည်း နာတာတွေ ရှိတယ်။ မိန်းကလေး အပျိုဖြစ်တိုင်း သဘောတူစရာ မဟုတ်ဘူး။
ရုပ်ရည်ရူပကာ၊ ပညာ၊ ဥစ္စာ၊ ပြီးတော့ မိဘမျိုးရိုး၊ စာရိတ္တ အကုန်ကြည့်ရမယ် တော်ရေ့ ။ ကိုယ့်သားက အကောင်းစား၊ ဆရာဝန်တော့။ ဘယ့်နှယ် တွေ့သမျှ မိန်းကလေး ချွေးမခေါ်ရအောင် ကိုယ့်သားက အလေနတော မဟုတ်ဘူး” စကားကို အဆက်မပြတ် ဆို၏။ ခဏမျှကြာလျှင် အခဲမကျေ သေးဟန်ဖြင့် “အခုမှ သားက နှစ်ဆယ့်ခွန်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ဘယ့်နှယ် ငယ်ငယ်လေး ရှိသေးတာ။
အားလုံး ပြည့်စုံနေတဲ့ မိန်းကလေးဆိုရင်တောင် မပေးစားနိုင်သေးဘူး။ အို ကုန်ကုန်ပြောမယ်ရှင်၊ အခုနေကတော့ သိကြားမင်းရဲ့ သမီးဆိုရင်တောင် မပေးစားနိုင်သေးဘူး” ဟု စကားဆက်၏။ ပြောရင်း ဒေါ်တင်မမကြီးသည် ငါ့စကားများ လွန်ကုန်ပြီလားဟု တွေးမိပြီး လင်အား မသိမသာ ချောင်းကြည့်၏။ လင်ဖြစ်သူ၏ မျက်နှာ ပြုံးရိပ်ရိပ် ရှိနေသည်ကို မြင်လျှင် စိတ်ထဲမလုံဘဲ “ဘာတုံး တော်က” ဟု ရန်လုပ် လိုက်သေးသည်။
ရထားပေါ်မှ ဆင်းလာသော သားကို မြင်မြင်ချင်း ဒေါ်တင်မမကြီးသည် “အမယ်လေး … သားက ပိုပြီးတော့တောင် ချောလာသေးတယ်” ဟု ဆီးကြိုသည်။ “အမေဖြင့် ပင်ပန်းတာနဲ့ ပိန်သွား မည်းသွားပြီလားလို့ စိုးရိမ်နေတာ” ဟုလည်း ခပ်ပိုပို ဆို၏။ ထို့နောက် သား၏ ဘေးတွင် ပြုံးတုံ့တုံ့ ရပ်နေသည့် လူငယ်အား သတိထားမိပြီး “အို … သားရဲ့ သူငယ်ချင်းလား၊ သားကလည်း အချောလေးပဲ” ဟု လက်ကို ဆွဲယမ်းကာ ဟန်မူပိုပို နှုတ်ဆက်ပြန်၏။
ထို့နောက် အိမ်တွင် သားကြိုက်သော ငါးဆုပ်ဟင်းများ ချက်ထားကြောင်း၊ နောက်တစ်နေ့တွင် ဝက်သားနှင့် မျှစ်ချဉ်ရောပြီး ချက်ရန် စီမံထားကြောင်း၊ သားမွေးထားသည့် ခွေးသည် မကြာသေးခင်ကပင် နေမကောင်းဖြစ်ကြောင်း၊ တိရစ္ဆာန်ဆရာဝန်ထံ နှစ်ခေါက်သွားပြရပြီး ပိုက်ဆံတစ်သောင်းခွဲ ကုန်သွားကြောင်း၊ ပြီးလျှင် သားရှိစဉ်က စိုက်ထားသော နှင်းဆီခင်းသည် ယခု ပွင့်နေပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် လွန်ခဲ့သော တစ်ပတ်က ထိုနှင်းဆီပန်းများကို ဖောက်သည်ပေးရာ ငွေငါးထောင်ကျော် ရကြောင်း ထွေလီကာလီ ဇာတ်စုံခင်း၏။ ပြောရင်း ဒေါ်တင်မမကြီး၏ စကားများသည် သူမအား ယောက္ခမကြီးဟု ခေါ်လိုက်သော မိန်းကလေး အကြောင်းကို ရောက်သွား၏။
“ခေတ်ကြီးကိုက ကြောက်စရာချည်း။ အမေ့ကိုများ သူက ယောက္ခမကြီးတဲ့၊ သူမို့လို့ မရှက်မကြောက်။ ဟိုတုန်းက ပြောကြတဲ့ ‘လူပျို့ အမေ ဆန်တစ်အိတ်နဲ့ တောင်ထိပ်မှာ ပုန်း’ ဆိုတာ ဒီခေတ်ကြီးမှ ဒီခေတ်ကြီး။ အမယ်လေး အခုကြုံတုန်း သားနှစ်ယောက်စလုံးကို မှာလိုက်ချင်ရဲ့။ ရည်းစားလည်း မရှာကြနဲ့ဦး၊ ချစ်သူလည်း မထားကြနဲ့ဦး၊ နောက် ကိုယ်က အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဖြစ်ပြီဆိုမှ အဲဒီကိစ္စတွေကို စဉ်းစား”
စုံစီနဖာ စကားများကို ပြောရင်း ဒေါ်တင်မမကြီးသည် နောက်နားကျကျမှ လိုက်လာသော သားနှစ်ယောက်အား “ပြောသာ ပြောနေရတာ အခုတောင် ရည်းစား ရှိနေကြပြီလား မသိဘူး” ဟု စကားနှိုက်သေးသည်။ သားနှစ်ယောက်က တစ်ဦးကို တစ်ဦး ပြုံးကြည့်ပြီး “မရှိသေးပါဘူး” ဟု အာမဘန္တေ ခံသည့်တိုင် မိန်းမ မကောင်းကြောင်းကို မန်လည်ဆရာတော် ရှုံးလောက်အောင်ပင် ဋီကာဖွဲ့လိုက်သေး၏။
သူမ၏သား ပြန်ရောက်သည့်နေ့မှစ၍ ဒေါ်တင်မမကြီးသည် အိမ်လည်ပြီး အတင်းမတုတ်နိုင်ရှာ။ အကြောင်းကား သူမ၏ သားအကောင်းစားအား ကင်းစောင့်တာဝန် ကျနေသောကြောင့် ဖြစ်၏။ အခါတိုင်းတွင် အမြဲလိုလို ပြုံးချိုရယ်မောနေသော ဒေါ်တင်မမကြီး၏ မျက်နှာသည် သား၏ မိန်းကလေး သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ယောက် လာလျှင်မူ အလိုလိုပင် တင်းကာ သွားသည်။
ထို့နောက် အသံမာမာဖြင့် “သားရေ ဧည့်သည်” ဟု ခေါ်ပေး၏ ။ ပြီးလျှင် ထိုမိန်းကလေး မပြန်မချင်း ဟိုဟာလုပ်သလိုလို ဒီဟာလုပ်သလိုလို အနားတွင် ရစ်သီရစ်သီ လုပ်၏။ ထိုမိန်းကလေးသူငယ်ချင်း အိမ်ပြန်သွားချိန်တွင်ကား “အဲဒီကောင်မလေးက …” အစချီကာ ဘယ်တုန်းက ရည်းစားထားဖူး၊ ကြက်ဥပင် မပြုတ်တတ်၊ ငရုတ်သီးပင် မထောင်းတတ် စသည်ဖြင့် ထိုမိန်းကလေး၏ မကောင်းကွက် အဖုံဖုံကို ဇာတ်စုံခင်း၏။
နောက်ဆုံး ယောက်ျားဖြစ်သူမှ “တော်ပါတော့ မိန်းမရယ်၊ မင်းမလည်း အပျို အတင်းပေါင်းချုပ် ဖြစ်နေပြီ” ဟု တားရသည်။ ထိုအခါတွင်လည်း ဒေါ်တင်မမကြီးသည် ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်မခံ။ “အို … ကိုယ်က သားရှင်ဆိုတော့ ဘယ်မိန်းကလေးက ဘယ်လိုဆိုတာ လေ့လာထားရတယ် တော်ရေ၊ စပ်စုချင်လွန်းလို့ မဟုတ်ဘူး။ သိတယ် မဟုတ်လား။ တချို့က မျက်နှာမှာ ပေါင်ဒါအဖွေးသားနဲ့ ပေါင်မှာ သေးစီးကြောင်းနဲ့ ဆိုတာ” ဟု ကက်ကက်လန် အကြောင်းပြန်သည်။
တစ်ရက်သားတွင်မူ ဒေါ်တင်မမကြီးသည် အိမ်တွင် အမြို့င့်သား ထိုင်နေရင်းပင် ဒေါသပုန် ထရသေး၏။ အကြောင်းကား မြို့၏ အပျို့ဂေဇက် သတင်းစာတွင် သူမအား အာသာဝတီ နွယ်နီနတ်ပန်းအား စောင့် ကြပ်သည့် ဘီလူးမကြီးအဖြစ် ရယ်ပွဲဖွဲ့နေကြကြောင်း တစ်ဆင့်စကား ကြားလိုက်ရသောကြောင့် ဖြစ်၏။
ထို့ နောက်တွင် ဒေါ်တင်မမကြီးသည် ပို၍ မျက်နှာကြော တင်းလာ၏ ။ ရံဖန်ရံခါ မိန်းကလေး အသံနှင့် ဖုန်းဝင်လာလျှင် ဘာဘာညာညာ မေးမနေဘဲ “မရှိဘူးဟေ့” ဟု ဆောင့်ကြီးအောင့်ကြီး ဖြေပြီး “ဂေါက်”ခနဲနေအောင်ပင် ဖုန်းကို ချ၏။ ပြီးလျှင် “ကောင်မလေးတွေက ကဲကိုကဲ လွန်းတယ်” ဟု ဆက်ရေရွတ်၏။
(၄) မနက်ခင်းတစ်ခုတွင် ဒေါ်တင်မမကြီးသည် သားက အိမ်သားများကို မပြန်ခင် ငါးပေါင်း လုပ်ကျွေးမည်ဟု ဆိုသဖြင့် လိုအပ်သည့် အဆာပလာများ ဝယ်ပြီး ပြန်လာ၏။ လမ်း၌ ထုံးစံအတိုင်း “သားပြန်လာသဖြင့် အိမ်ပင် မလည်နိုင်ကြောင်း၊ ယခုခေတ် ကောင်မလေးများကလည်း ကဲလွန်းကြောင်း” အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ပြော၏။
ဤတွင် ဒေါ်တင်မမကြီးအား အတော် မြင်ပြင်း ကတ်နေဟန်တူသည့် မိန်းကလေးတစ်ဦးသည် “အန်တီရေ ဒေါင်းများ က,တာ မြင်ဖူးတယ် မဟုတ်လား၊ အရှေ့ဘက်က ကြည့်ရင် သိပ်လှတာ။ အဲ အနောက်က ကြည့်ရင်တော့ တော်တော်ကို ကျက်သရေ မရှိတာ” ဟု ပြောလက်စ, စကားနှင့် မဆီမဆိုင် ပြော၏။ ဘာဆိုလိုသည်ကို ရုတ်တရက် စဉ်းစားမရသဖြင့် ဒေါ်တင်မမကြီးသည် ဘာမျှ ပြန်မပြောလိုက်နိုင်။
အိမ်အပြန်လမ်း တစ်လျှောက်တွင် ထိုစကားကို တအုံနွေးနွေး တွေးကာ “ဒီကောင်မလေး ဘာပြောချင်တာလဲ” ဟု ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ ဖြစ်ရ၏။ တစိမ့်စိမ့်တွေးရင်း အိမ်နားသို့ရောက်မှ “ဘုရားရေ၊ ငါ့သားမှာ ရည်းစားရှိနေပြီလို့ ဆိုချင်တာလား” ဟု စဉ်းစားမိသည်။ “ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ အန်တီကသာ တိုနေတာ အန်တီ့သားမှာ ရည်းစားနဲ့လို့ ပြောချင်ပုံပဲ” ဟု ဆက်တွေးမိလျှင် ဒေါ်တင်မမကြီး၏ ရင်သည် တဒိန်းဒိန်း ခုန်လာလေ၏ ။
အိမ်သို့ ရောက်ချိန်တွင် သားနှင့် သား၏သူငယ်ချင်းသည် နှင်းဆီပန်းခင်းအလယ်တွင် ရေပုံးကိုယ်စီ ကိုင်လျက် ခေါင်းချင်းဆိုင် ရယ်နေကြသည်ကို ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ မြင်လိုက်၏။ ပြီးလျှင် သူမအနား ရောက်သွားချိန်တွင် ပြုံးစိစိ မျက်နှာများဖြင့် ဘာအကြောင်းမျှ ပြောမနေကြသလို လူချင်း ခွာသွားကြသည်ကိုလည်း သတိထားမိ၏။
ဒေါ်တင်မမကြီး၏ စိတ်ထဲမှ “သေချာပါပြီ၊ ဒါ သူတို့ရည်းစားတွေအကြောင်း ပြောနေတာပဲ နေမှာ၊ သားမှာ ရည်းစားရှိနေပါပြီ” ဟု ပိုထင်လာ၏။ ထို့ကြောင့် “ကဲ သားတို့ မီးဖိုထဲမှာ ကြိုက်သလို ချက်ကြ၊ အမေတော့ မောတာနဲ့ အိမ်ရှေ့မှာ နားလိုက်ဦးမယ်” ဟု ပ,ထုတ်ကာ အားလုံးအလစ်တွင် သားများနေသည့် အခန်းအတွင်း ဝင်ကာ မွှေလေ၏။
ဤသို့ဖြင့် ဆယ်မိနစ်ကျော်ကြာလျှင် ဒေါ်တင်မမကြီး၏ လက်ထဲတွင် မသင်္ကာစရာ စာအုပ်နှစ်အုပ်ကို ဆုပ်မိလေ၏။ စာအုပ်နှစ်အုပ်သည် ပုံစံတူ၊ အရောင်တူဖြစ်ပြီး မတူသည်ကား အထဲမှ လက်ရေး ဖြစ်သည်။၊ ဒေါ်တင်မမကြီး တစ်အုပ်ကို ဖျတ်ခနဲ လှန်ကြည့်မိလေ၏။ “ကောင်းကင်မှာ တောက်ပနေတဲ့ ကြယ်တွေ အများကြီးထဲမှ မင်းက အတောက်ပဆုံး ကြယ်တစ်ပွင့်ပါ” ဟူသော စာကို ဖတ်လိုက်ရ၏။
“ဒါ သား လက်ရေး မဟုတ်ဘူး။ ဟိုကောင်လေး စာအုပ်နေမှာ” ဟု တွေးပြီး ထိုစာအုပ်ကို ချက်ချင်းပိတ်ကာ နောက်တစ်အုပ်ကို လှန်ကြည့်ပြန်၏။“အချိန်တွေ ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဘဝတစ်ခုလုံး လက်တွဲရမယ့် လူဆိုတာ သေချာလာတယ်။ တကယ် ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်တော့မှ မခွဲကြေးနော်။ ချစ်တယ်ကွာ … အရမ်းချစ်တယ်။”
ဘုရားရေ … သားလက်ရေးမှ သားလက်ရေး။ ဒေါ်တင်မမကြီးသည် ဒိန်းခနဲ ငယ်ထိပ်တက်ဆောင့်သလို ဖြစ်ကာ စာရွက်များကို ဖျိုးဖျိုးဖျပ်ဖျပ် လှန်ကြည့်၏။ ချစ်သည့် အကြောင်း၊ ကြင်နာသည့် အကြောင်းများသာ တွေ့ရပြီး ကောင်မလေး နာမည်ကား ရှာမတွေ့။ “ရည်းစားရှိတာတော့ သေချာပါပြီ။ ဘယ်က ကောင်မလေးများလဲ မသိဘူး” ဟူသော အတွေးဖြင့် ဒေါ်တင်မမကြီးသည် ထူသလိုလို၊ ထုံသလိုလို ဖြစ်လာကာ အိမ်ရှေ့ခန်းဘက် ပြန်ထွက်ခဲ့၏။
ထိုစဉ်ခဏအချိန်က နှင်းဆီခင်းထဲတွင် သားနှစ်ယောက် ခေါင်းချင်းဆိုင်နေကြသည်ကို ပြန်မြင်ယောင်ပြီး “သူတို့ပဲ ရှိရင်တော့ သူတို့ရည်းစားတွေ အကြောင်း ပြောကြမှာပဲ” ဟု တွေးမိလျက် မီးဖိုခန်းဘက်သို့ ခြေဖွနင်းကာ ထွက်ခဲ့သည်။ ပြီးလျှင် မဟတဟ ရှိနေသည့် တံခါးသို့ကပ်ကာ အသာချောင်းလေ၏။
ဘုရားရေ …။ ဒေါ်တင်မမကြီး၏ ရင်သည် ကုလားဘုရားပွဲ လှည့်သလို တဒုန်းဒုန်း ခုန်လာသည်။ သူမစိတ်တွင် လောကကြီးသည် ဇောက်ထိုးမိုးမျှော် ဖြစ်ကုန်ပြီ ထင်ပါရဲ့ဟုလည်း တွေးမိ၏။ ယင်းနောက်တွင်ကား ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထိန်း၍ ထွက်လာသည့်တိုင် ဒေါ်တင်မမကြီး၏ ခြေနှင့်လက်များသည် တဆတ်ဆတ် တုန်ခါနေကြသည်။
ထိုသို့ တုန်တုန်လှုပ်လှုပ် လျှောက်လာရင်းပင် နားထဲ၌ “အင် … အရှေ့မှာ အမေတို့ ရှိနေတယ်နော်” ဟူသော သား၏ ချွဲတဲတဲ စကားသံကို ပြန်ကြားသည်။ ပြီးလျှင် သား၏သူငယ်ချင်းသည် သားအား ရွတ်ခနဲ နမ်းလိုက်သည်ကိုလည်း မြင်ပြန်၏။ ထိုအခါ ဒေါ်တင်မမကြီး ချက်ချင်းပင် ခေါင်းကို ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲနေအောင် ခါယမ်းမိ၏။
“အမယ်လေး … လေး။ ငါ့ကို လူတွေ ဘယ်လောက်များ ရယ်ကြမလဲ မသိဘူး။ ငါကတော့ သားကို တိုလွန်းလို့ ကာလိုက်ရတာ၊ အခုတော့ သားက …။ ဘုရား …၊ ဘုရား … တစ်ခုခုတော့ လုပ်မှဖြစ်မယ်၊ တစ်ခုခုတော့ လုပ်မှဖြစ်မယ်”
ထို့နောက် ဘုရားအလီလီတ,ကာ ယောင်တိယောင်ချာဖြင့် သတိလက်လွှတ် တတွတ်တွတ်ရွတ်ရင်း လျှောက်လာသော ဒေါ်တင်မမကြီးသည် တယ်လီဖုန်းစင်နား ရောက်လျှင် ရုတ်တရက် တုံ့ခနဲရပ်ပြီး ဖုန်းခွက်ကို ဆတ်ခနဲ ကောက်ကိုင်လိုက်သည်။
“ဟယ်လို … မြလား။ အဟင်း … ဟင်း၊ တင်မ ပါ။ ဒီလိုလေ သားက အခု အိမ်ပြန်ရောက်နေတော့ တင်မတို့ကပဲ မြတို့ကို ထမင်းစား ဖိတ်ရမလား၊ ဒါမှမဟုတ် မြတို့ကပဲ တင်မတို့ကို ထမင်းစားဖိတ်မလား တစ်ခုခု စီစဉ်ကြရအောင်လို့လေ …။ အဟင်းဟင်း၊ သိတယ် မဟုတ်လား။ သမီး နီလာလေးနဲ့ သားကို …”
ဒေါ်တင်မမကြီး၏ အသံသည် ချိုမြဝေလွင်နေသော်ငြား မျက်နှာကား မပြုံး။
ရွှေအမြုတေ၊ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၁၅။
Posted by Alex Aung at 12:46 PM
Penis Injection Risks - ကျားအင်္ဂါဆေးထိုးတဲ့ အန္တရာယ်...